नत्र नयाँ कलाकारमाथि कसले खतरा मोल्छ: नव नायिका सुपुष्पा – जलजला अनलाइन
नत्र नयाँ कलाकारमाथि कसले खतरा मोल्छ: नव नायिका सुपुष्पा
Posted on February 2, 2019 Author Comments Off on नत्र नयाँ कलाकारमाथि कसले खतरा मोल्छ: नव नायिका सुपुष्पा
माघ १९, काठमाडौं। शुक्रबारबाट ‘रणवीर’की नायिकाको रूपमा सुपुष्पा भट्टको नेपाली रजतपटमा यात्रा सुरू हुँदैछ। यसबारेमा उनी उत्साही भन्दा पनि ‘ब्ल्याङ्क’जस्तै छिन्।
यो खबर सेतोपाटी अनलाइनमा छ । ‘अब एक्टर नै बन्छु भनेर मलाई पनि थाहा थिएन, मैले मोडलिङबाट सुरू गर्छु ठानेको थिएँ तर सिनेमा अचानक आइपुग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रशान्त ताम्राकारसँग फेसबुकमा कुरा भइराख्थ्यो। रणवीरको लागि नयाँ अनुहारको खोजी भइरहेको रहेछ। अडिसनको दिन भन्नुभयो। अडिसन दिएँ र छानिएँ।’
‘यता आउँछु त भनेको त थिइनँ तर उहाँहरूलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ किनकि सानोदेखि स्टेजमा नाच्ने गाउने गरिरहेको हुन्थेँ,’ उनी भन्छिन्। प्रशान्तको सल्लाहमा अडिसन दिएकी उनले फोनबाट नायिकामा छानिएको थाहा पाइन्।
‘बेलुका कल आयो तिमी छानियौं भनेर। बाबालाई सुनाएँ,’ उनले भनिन्। यो खबर सुन्दा अक्सर धेरै उत्साहित हुन्थे होलान् तर सुपुष्पालाई भने ‘वाउ’ भनेर एकदमै एक्साइटेड अनुभव भएन। ‘यो कुराहरू पहिले नै कल्पना गरिरहेको भएर होला, मलाई वाउ भनेर एक्साइट गराएपछि अझै गर्न सक्छु फिल भएको थियो,’ उनले भनिन्।
उनलाई सिनेमाका निर्देशक गोविन्दसिंह भण्डारीले ‘मैले तिमीलाई काम गराउन सक्छुजस्तो लाग्यो त्यही भएर छानेको’ बताएका थिए। अडिसनका लागि ‘प्रेमगीत’ सिनेमाको ‘के हो चान्स मारेको?’ भन्ने डायलगको तयारी गरेर गएकी थिइन्।
‘अडिसन दिन जाँदा यो चाहिँ मेरो फस्ट एण्ड लास्ट चान्स हो गर्न सकें भने अगाडि बढेँ बढिनँ भनेर आफूमा आत्मविश्वास ल्याएको थिएँ। म घरमा जसरी गरिरहेको छु त्यहाँ पनि त्यसरी नै गर्छु भनेर गएको थिएँ,’ उनले भनिन्। आफ्नो आत्मविश्वासलाई कायमै राख्न होला अडिसन दिँदा उनले त्यहाँ कोही पनि छैन जसरी दिइन्।
‘एक्टिङ गर्न अलिअलि गाह्रो भयो तर क्यामेरा फेस गर्न समस्या भएन। जब-जब टेक हुन्थ्यो म क्यामरा छ भन्ने बिर्सेर गर्थें,’ उनले भनिन्। सिनेमामा छानिनुसँगै राम्रो कथा भएको सिनेमामा पाएको कुराले दंग पार्‍यो। त्योसँग सिनेमाका सिनियर सहकर्मीहरू उनलाई खुसी पार्ने अर्को कुरा थियो।
उनी आफूमा हिरोइनमा हुनुपर्ने गुणहरू रहेको मान्छिन्। उनी भन्छिन्,‘ममा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। राम्रो नाच्न सक्छु, एक्सप्रेसन राम्रो दिन सक्छु।’ आफ्नो सबल कुरासँगै उनलाई आफूमा के कुराको कमी छ भन्ने पनि थाहा छ, जसलाई उनी विस्तारै कम गरिरहेको बताउँछिन्।
सिनेमाको सुटिङपछि डबिङ हेर्दा उनी आफ्नो कामसँग आफैं चाहेजस्तो खुसी छैनन्। ‘डबिङमा हेर्दा छ्या भयो। आफूलाई डल फिल गरें अझ राम्रो गर्न सक्थेँ भन्ने भयो। ट्रेलर, गीत हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्यो। अर्को सिनेमामा यसलाई कम गर्छु,’ उनी भन्छिन्।
सुटिङमा घामले गर्दा होला पूरा आँखा खोलेर अभिनय गर्न नसकेको उनले चाल पाएकी छन्। भन्छिन्, ‘अब यस्ता कुरामा अब बढी ध्यान दिन्छु। अभिनय अझै सिक्नुछ।’
रणवीरमा हिरोको प्रेमिका बनेकी सुपुष्पाको रूची एक्सन सिनेमामा छ। उनलाई एक्सन गर्न सक्छु भन्ने छ। ‘एक्सन गर्न मन छ। मैले जस्टिफाइ गर्न सक्ने जत्ति क्यारेक्टर गर्न मन छ। तर एक्सन गर्ने धेरै मन छ,’ उनले भनिन्।
आफ्नो काममा उनी आफूलाई ‘डल’ लागे पनि सिनेमामासँगै काम गरेका अग्रज कलाकारको प्रतिक्रियाबाट उनी खुसी छिन्। ‘टिकासरहरूले एकदमै राम्रो गरेको छ्यौ छोरी भनेर भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।
नेपालमा रोकियो बलिउड फिल्म ‘कलंक’, देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
Posted on April 17, 2019 Author जलजला अनलाइन
बैशाख ४, काठमाडौं । आजदेखि विश्वका धेरै देशमा एकसाथ रिलिज भएको बलिउड फिल्म ‘कलंक’ नेपालमा भने रिलिज हुन सकेन । चलचित्र विकास बोर्डका कारण यो फिल्म नेपालमा रिलिज हुन नसकेको हो । शुक्रबार मात्र नयाँ फिल्म रिलिज हुने परिपाटीलाई जोगाउन विकास बोर्डले यो फिल्म रोकेको हो । नेपालमा नयाँ फिल्म चाडपर्व बाहेकको समय शुक्रबार मात्र […]
सल्यानका दुई चेली तीज गीत अवार्डबाट सम्मानित
Posted on August 25, 2017 Author जलजला अनलाइन
भदौ ९, सल्यान । सल्यानका २ गायिकाहरु छाया‘ छबि तीज गीत म्युजिक अवार्ड अन्तरगत सर्बोउत्कृट सन्देशमुलक तीज गीत अवार्ड हासिल गर्न सफल भएका छन् । लोक सांगितिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल मध्यपश्चिमको सल्यान जिल्लामा जन्मीएर काठमाण्डौलाई कर्मथलो बनाई निरन्तर लोक संगितको क्षेत्रमा लामो संघर्ष गर्दै गायन कला मै आफुलाई समर्पित गरेका […]
बिनोदले अनिशालाई ‘माया टोक्नै नमिल्ने’ भनेपछि… (भिडियोसहित)
साउन, बर्दिया । संसारमै बिरलै मिल्ने यो संयोग मिलेको बर्दिया र धादिङका दुई प्रभात सुवेदीको यो जोडीको । यिनै दुई जोडी धेरै अघिदेखि नामले परिचित भएपनि दुई दशकपछि मात्रै उनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालले जोड्यो र भेटघाट भयो । अनि नाम र थर मात्रै हैन दुबै जनाको रुचीको क्षेत्रपनि मिलेपछि त अझै के चाहियो र ? धादिङका […]
दाङमा पहिलोपटक हवाईजहाजसहितको ड्रिम पार्क बन्दै